उठ्ला त साँखुको साख ? - USNEPALNEWS.COM
उठ्ला त साँखुको साख ?
भूकम्पले ढलेको यहाँको प्राचीन बस्ती र सम्पदाले पूर्णता पाउन अझै कति वर्ष पर्खनुपर्ने हो त्यसको टुङ्गो छैन ।
वि.सं २०७२ को भूकम्पबाट साँखु बजारका मौलिकशैलीका धेरै घर र सम्पदा क्षतिग्रस्त भएका थिए । लिच्छविकालीन इतिहास बोकेको साँखुको भूकम्पपछि निर्माणकार्यले गति लिन नसक्नु दुःखद रहेको स्थानीय पवनलाल श्रेष्ठ बताउँछन् । श्रेष्ठका अनुसार अहिलेसम्म भत्किएका धेरै घर बनेका छैनन् । उनी भन्छन्, ‘यहाँ पुनःनिर्माणको कामले गति लिनसकेको छैन । पुरानो शैलीमा बस्ती पुनःनिर्माण गर्न निकै कठिन छ । पहिलेको तुलनामा अहिले प्राचीनशैलीअनुसार घर बनाउन निकै महँङ्गो पर्ने हुँदा पनि यहाँको इतिहास लोप हुने अवस्थामा पुग्छकी भन्ने डर छ ।’
साँखु करीब तीन हजार ३०० वर्ष पुरानो बस्ती हो । यहाँको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक पक्ष, बसोवास क्षेत्र, बज्रयोगिनी देवीको धार्मिक महत्व, शालीनदीको कथालगायतको विषयले इतिहास बोकेको छ । प्राडा.डिल्लीराज शर्मा र प्रा डा टेकबहादुर श्रेष्ठले ‘साँखु हिस्टोरिकल एण्ड कल्चरल हेरिटेज’ नामक पुस्तकमा पनि साँखुको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक पक्षबारे धेरै कुराहरु प्रष्ट पारेका छन् ।
नगरपालिकाले दिएको जानकारीअनुसार पुरानोशैलीका पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त भएका ७०० घरमध्ये ९० वटा निर्माण चरणमा छन् भने ११ घर सम्पन्न भइसकेको छ । जनस्तरबाट मात्र नभई सरकारका तर्फबाट पनि यस्ता ऐतिहासिक संरचनाको जगेर्ना गर्ने काम तदारुकताका साथ भइदिए साँखुको वैभवपूर्ण सांस्कृतिक सम्पदालाई चिरकालसम्म बचाइराख्न सहयोग पुग्ने पुरातत्वविद् डा.श्रेष्ठ बताउँछन् ।